Waa Maxay Bidaarta Cudurka ah ee “Alopecia”? | Entertainment and News Site
Home » bulshada » Waa Maxay Bidaarta Cudurka ah ee “Alopecia”?
Waa Maxay Bidaarta Cudurka ah ee “Alopecia”?
daajis.com:- Bidaarta aan dhaxalka ahayn oo cudurka noqoto waxaa loo yaqaannaa “Alopecia”, waxayna timaadaa markuu difaaca jirkaaga uu la dagaallamo unugyada tinta ay ka soo askugmaan.
Bidaarta noocaan ah waxay ku badan tahay dadka ka da’ yar 20 sano laakiin caruurta, haweenka iyo dadka waawaynba way gali kartaa.
Way dhacdaa marmarka qaar in tinta oo idil ay haaddo, waxay bidaartaan kaga duwan tahay bidaarta dabiiciga ah, waxaa laga yaabaa in tinta ay dib ugu soo laabato meel ay ka daadatay laakiin hadane meel kale ay go’do.
1- Haddii dahxal ay jirto xagga qoyska.2- Haddii bidaarta ay ku gasho adioo aanan qaan gaarin.3- Haddii aad qabtid xanuun kale oo uu keeno cillad difaaca jirka ka jirto.4- Haddii aad qabtid allerjiga dhaxalka ah.
Badanaa xanuunkaan wuxuu saameeyaa unugyada tinta, qaar madaxa qeybo ka mid ah ayuu ku egyahay waxaana loo yaqaannaa “Alopecia Areata”, qaarna tinta oo idil ayay jirka ka buubisaa waxaana loo yaqaannaa “Alopecia Universalis”